Hevitra mandalo Resaky ny mpitsimpona akotry: Ny fomba ratsy natao tsy haverina intsony | NewsMada
Hevitra mandalo Resaky ny mpitsimpona akotry: Ny fomba ratsy natao tsy haverina intsony
Par Les Nouvelles sur 20/07/2020
Nisy ny fanonganam-panjakana, nisy ny fangalana fitondrana an-keriny, nisy fanongotana fahefana amboletra sy am-pamitahana, tsy misy afaka manda an’izany, samy mahafantatra an’izay nataony na tsy misy aza no miaiky am-pahibemaso ny fahadisona noefainy mom­ban’izany. Ny rehetra moa nohon’ny fitiavan-tanindrazana samy mirary sy mivoadivoady avokoa mba tsy hisehon’ny fisontomam-pahefana tsy an-drariny no tsy ara-dalàna intsony. Marina any izay.
Ny vahoaka moa dia maneho hatrany ny faniriny fiovana, samy manome toky momban’izany daholo ny mpilatsaka ho fidina na fifidianana filoha izany na fifidianana solombavam-bahoaka, na fifidianana ben’ny tanàna… Inona moa anefa ireto zavatra tsy haverina atao intsony eo amin’ny fitantanana mba ho tanteraka izany fiovana izany ? Tsy mbola nisy ny tena fiarahana nidinika an-tsipirihany an’ireo fomba tsy mendrika fa hatrany dia ny fampanantenana an’ireo hatao rahampitso lalandava no asisika anatotofana ny tsy nety noefaina omaly. Ny fitondrana toy rizareo ankehitriny nohon’ny fahalalahana momban’ny fanambaran-kevitra, dia tsy maintsy mizaka ny tsikera. Tsy gisitra amin’ ny fanehona tsikera ny mpanohitra, zony ary adidiny izany, nefa sedra an’izay anjarany koa ny fahatatesana fanontaniana mikasika ny fomba nasehony raha teo amin’ny fitondrana izy. Arak’izany rariny raha any amin’Andriamatoa Marc Ravalomanana izay londohan’ny fanoherana amin’izao fotoana izao rehefa filoha-pirenena teo aloha no miantefa ny fanontaniana.
Araky ny fitadidina dia ny fitondrany no nisantatra an’ity fandrarana olom-pirenena iverina eto an-tanindrazany, samy mahatadidy ny fanakanana an’I Pierrot Rajaonarivelo izay saika ilatsaka ho fidina ifaninana taminy. Nifototra taminy taty aoriana ny fampiasana an’io fepetra io. Mbola ankatoaviny ve ?
Tsy nisy ny fahalalahana madio ahafahan’ny tsirairay nanambarana ny heviny, ohatra iray dia ny fandrahonana an’izay nanaiky anome sehatra an’ITompoko­lahy Herizo Razafimahaleo hiaonany tamin’ny mpanao gazety na tamin’ny mponina, na tany Mahajanga izany na teto Iarivo. Ahoana ny heviny momban’izany ?
Raha namoaka ny tetika nomena anarana MAP ny filohampirenena tamin’izany ho fanaingana ny mponina anohana ny fanaovana ezaka dia nilaza fa tsy tia tanindrazana izay tsy mankatoa ny fandrosoana vokatry ny fampiharana ny MAP. Noraisain’ny atsasan’ny mponina fa fanamelohana azy ho mpankahala ny fandrosona izany hoe fahavalo-pirenena izany fitsikerana izany. Nilaza koa anefa ny Filoha fa tsy misy antony anaovana fampihavanam-pirenena na efa nila itresaka roa aza ny firenena tao aorianan’ilay «fihazàna lambo ».
Mila dinidinihana daholo ny fanontaniana toy izany ahafahana mandroso amin’ny fiovana.